Ilmaan Nafxanyaa Oromoo Irratti Shira Shiru, Lukkeeleenis Bakkuma Nyaatanii Dutu! – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooIlmaan Nafxanyaa Oromoo Irratti Shira Shiru, Lukkeeleenis Bakkuma Nyaatanii Dutu!
Ilmaan Nafxanyaa Oromoo Irratti Shira Shiru, Lukkeeleenis Bakkuma Nyaatanii Dutu!
(Ibsa Ajaja Ol-Aanaa ABO/WBO), Ebla 12 2020
Oromoon impayera Itoophiyaa keessatti sirnoota dhufaa darbaan aangoo qabatan hundaan mirga isaa sarbamee fi qabeenyaa isaa saamamee, biyya isaa irratti mirga abbaa biyyummaa dhabee jiraate. Har’as, durummaa sirna gita bulchiinsa PP kan birookraasii EPRDF irraa dhaaleen itti fufee miidhaa ulfaataa, seenaa gabrummaa keessatti hiriyaa hin qabne ummata Oromoo irraan gahaa jira.
Ilmaan Nafxanyaas sirna kana keessatti haguuggatanii ABO/WBO dhabamsiisuuf sosso’aa jiraachuun ifa galaa dha. Kanaafuu, lukkee tolfatanii saba qoqqooduun, barnoota abbaa isaanii Minilik irraa fudhatan Kibba, Lixaa, Kaabaa, Bahaa fi Gidduu-Galeessa Oromiyaa keessatti hojii irra oolchaa jiru. Haala kanaan lubbuun saba keenyaa kumaatamaan wareegaanii, qabeenyi saba keenyaa kumaa fi kitilaan lakkaahamu mancasan. Akeeki saba keenya irratti lola labsanis, ol-aantummaa Nafxanyaa bakka isaa duriitti deebisuuf kan akeekkate ta’uu ofii isaaniis lallabu.
Gidduu kana ajjeechaa weerartuun Nafxanyaa ilmaan Oromoo irratti gaggeessan haguuguuf lukkeeleen duula ololaa WBO irratti bananii jiru. Kunis, shiraa fi olola rakashaa kan Nafxanyootaan tolfame media hawaasummaa irratti, namoota maqaadhaaf qondaala mootummaa ofiin jedhaniin gaggeeffamaa jiru dha. Kunis, Kibba Oromiyaa, Gjuii keessatti maanguddoo Oromoo Haaji Umar Nageessaa Waaccuu jedhaman faa fi Lixa Oromiyaa, Ganjiitti ammoo hojjettoota Wangeelaa kan ta’an obbo Asaffaa Mokonnon faa irratti akka WBOn tarkaanfii fudhatee ajjeeseetti ololaa jiru.
WBOn akkuma yeroo hedduu irra deddeebihee ibsetti, lolli isaa humna waraanaa PP kan hidhatee akeeka ABO/WBO dura dhaabbatee isa lolaa jiru waliin malee maanguddoota, abbootii amantaa fi walumaa galatti siviilii irratti kan qiyyaafate akka hin taane ajajaan ol-aanaa ABO/WBO gadi jabeessee hubachiisa. Ajjeechaan ilmaan Oromoo bebbeekamoo irratti gaggeeffamaa jiru kun gaaffii bu’uuraa Oromoon qabu of duuba deebisuuf tikoota PPtiin ta’e jedhamee shiramee raawwatamaa jiru akka ta’es hubatamuu qaba. Namooti media hawaasummaa irratti WBO maqaa xureessuuf tattaafatan kun maaliif waggaa tokkoo oliif yeroo ilmaan Oromoo kumaan lubbuun darbu, qabeenyi Oromoo kitilaan manca’u afaan cuqqaallatanii amma afaan banatan? Gaaffii jedhu uummata keenyaaf dhiisna.
Seenaa dhala namaa keessatti, seenaan ergamtoota diinaa takkaa tolee hin beeku. Diinni akeeka isaa ittiin galmaan gahuuf qofaa itti dhimma bahee, dhuma irratti garuu akka qodaa cabeetti darbee gata. Ergamtooti diinaa har’a ABO/WBO irratti maqaa ‘shanee‘ jedhuun ololanis dantaa diinaa tiksuuf dhama’u. Injifannoon WBO galmeessaa jiru hirriba isaan dhorka. Akeekni WBO fi uummata Oromoo harkaa qabu yoo galii isaan gahe, yakki gooftoliin isaanii, ilmaan Nafxanyootaa, hojjetan kan itti gaafataman ta’uu waan beekaniif gooftolii isaanii irraa yakka qulqulleessuuf dhama‘u. Akkuma saree bakka nyaatanii dutu.
Ajajni Ol-Aanaa ABO/WBO ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru mara ni balaaleffata. Akkasumas, Ajajni Ol-Aanaa ABO/WBO ajjeechaa, saaminsa, gudeeddii, manca’uu qabeenyaa fi sarbamu mirga dhala namaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa turee fi ammaan tanas bal’inaan itti fufee jiru maraaf qaamni walaba ta’e tokko dhaabbatee dhugaa jirtu uummata Oromoo fi addunyaaf akka ibsu waamicha dhiheessa. Yakka ajjeechaa abaaramaa raawwataman kanneen mara abaaraa, maanguddootaa fi abbootii amantaa maraaf kabajaa fi ulfina guddaa qabaachuu mirkaneessa.
Yeroo ammaa kanatti, yeroo dhukkubni daddarbaa Koronaa jedhamu ilmaan namaa addunyaa lafa irraa haxaawaa jirutti, yeroo mootummootni hedduun sochii lammii isaanii ugguranii uummata isaanii balaa irraa ittisaa jiran keessatti, PPn faallaa kanaa dhaabbachuun uummata keenya Oromiyaa keessa jiraatu maqaa walgahiidhaan walitti qabuun balaa vayrasiin kanaan akka hubamu haala aanjessaa jiru. Kun ammoo duguggaa sanyii Minilik ilmaan Oromoo irratti raawwate irraa adda baafamee kan ilaalamu miti. Dhimma walgahiidhaan wal qabatee balaa dhukkuba daddarbaan Oromiyaa keessatti dhaqabuu maraaf kan itti gaafatamu mootummaa shiraa kan ilmaan Minilik fi lukkeelee isaanii utubamee, kan shiraan uummata keenya fixaa jiru ta’uu hubachiisaa, uummatni keenyis balaa diinni isaaf qopheessaa jiru kana keessa osoo hin seeniin of eeggannoo jabaa tolchuun, yeroo ammaa kanatti walgahii kamuu qopheeffamu irraa akka hin hirmaatnee fi balaaleffatu ajajaan ol-aanaa ABO/WBO dhaama. Dabalataan, Ajajni Ol-Aanaa WBO ummatni Oromoo fi firootni Qabsoo Bilisummaa Oromoo marti falmaa qabsaawotni ilmaan sabaa qaqqaaliin ho’a-qabbana, beela-dheebuu, akkaasumas humna gabroomfattuuf osoo hin jilbeeffatiin baddaa fi gammoojjii golee Oromiyaa cufa keessatti diinaan morma wal qabanii injifannoo boonsaa galmeessisuutti jiran cinaa; beekumsa, ogummaa fi qabeenya ofii osoo hin qusatiin deeggaruun galma gahinsa qabsoo keenyaa akka shaffisiiftan gaafata.
Maayii irratti, Ajajni Ol-Aanaan WBO ololaa fi shira diinotni Qabsoo Bilisummaa Oromoo kallattaniis ta’e karaa ergamtootaan itti aggaammatan kamuu murannoo fi gootummaan burkuteessuun akeekaa fi amna bilisummaa qabatee jiru irraa osoo hin maqiin injifannoo waaraa saba ofii gonfachiisuuf kan halkanii fi guyyaa itti fufinsaan hojjetu ta’uu haamilee fi onnee guutuun ibsa.
Ebla 12, 2020
RSWO Ibsa Hoogganni Olaanaan ABO/WBO; OMN: Gorsaafi Kadhata Hordoftoota Amantaa Ortodooksiif
Azeb Mesfin, co-founder and CEO says:
-Companies should not be allowed to reduce the hours of work for their on-call employees or Companies should not be allowed to reduce the pay amount for their on-call employees no matter what during the state of emergency, unless the companies declare bankruptcy before reducing the pay amounts to their on-call employees .
https://www.ilo.org › topics › lang–en